RW hore ee Britain David Cameron oo shaqada ka tagay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldRW hore ee Britain David Cameron oo shaqada ka tagay
RW hore Britain iyo qoyskiisa oo ka tagay xafiiska iyo hoyga madaxtooyada kadib markuu wareejiyay xilka uu dhawaan iska-casilay. Sawirka: PA.
Raysulwasaaraha Britain David Cameron ayaa xilka ka tagay maanta oo Arabaco ah kadib markii dalkiisa uu ka baxay Midowga Yurub, afti dad weyne oo dhawaan la qabtay.
Cameron ayaa taageersanaa in dalkiisu uusan ka bixin Midowga Yurub balse waa laga adkaaday fikradiisii.
Wuxuu si rasmiya ugu gubiyay iscasilaadiisa boqorada Queen Elizabeth maanta gelinkii dambe wuxuuna xilka ku wareejiyay haweenayda badali doonta oo la dhaho Theresa May.
Cameron ayaa u sheegay wargeyska The Telegraph inuu rajaynayo inuu tagay “dalka oo xoogan, dhaqaale hagaagsan iyo fursado badan nolosha leedahay”.
Theresa May ayaa noqonaysa haweenaydii labaad oo RW ka noqota Britain kadib Margaret Thatcher.
Theresa ayaa la filayaa in ay dhawaan soo dhisto golaheeda cusub ee wasiirada.